नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई देखेर संसार नै आश्चर्यमा : अध्यक्ष दाहाल - नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई देखेर संसार नै आश्चर्यमा : अध्यक्ष दाहाल
२०७५, १ फाल्गुन, 01:42:31 PM
काठमाडौं । संसारले नेपाललाई ध्यानपूर्वक हेर्नैपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क पाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यसले ने क पाको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने बताए ।
उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुई धार संसदीय बाटो र सशस्त्र विद्रोहले कुनै समय एकअर्कालाई सिध्याउने र आफू मात्र स्थापित हुने प्रयास गरेको स्मरण गरे । अहिले दुबै मिलेर मदन भण्डारी स्मृति दिवसमा पार्टी एकता गर्नु र विद्रोह थालेको दिन देशभर मनाउनु दुई ऐतिहासिक परिघटना भएको उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा नगरी नहुने कामको चापले मात्र कार्यक्रममा आउन नसकेको उनले बताए । पार्टी एकता ढिलो भएकोमा के होला भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला भएको यो कार्यक्रमले केही दिनभित्र पार्टी एकता टुंग्याउने प्रेरणा दिएको समेत उनले बताए । उनले नेपालका कम्युनिस्टहरुले संसारलाई नै आश्चर्य पार्ने काम गरिरहेको बताए ।
नेकपामा नेता कार्यकर्ताको घुलनशिल प्रक्रिया, ७७ जिल्लाको इन्चार्जमा को–को फालिए !
नेकपा भित्र बामदेवको भाउ बढ्यो ! ओली, प्रचण्ड र नेपालको तानातान